Bixby hadda waxaa laga heli karaa in ka badan 160 milyan oo qalab | Androidsis
Tan iyo markii la bilaabay Samsung Galaxy S8 suuqa, inbadan waxay ahaayeen dhaliilo uu helay kaaliyaha shaqsiyeed ee Samsung Bixby, caawiye ay isticmaaleyaal badani rabin inay fursad siiyaan inkasta oo noqo mid ka mid ah kuwa ugu horumarsan suuqa, isagoo aad uga sarreeya Apple's Siri.
In kasta oo sumcadda xun ay ku dhex leedahay adeegsadayaasha qaarkood, shirkadda Kuuriya waxay sii wadaa inay ku adkaysato oo ay ka shaqeyso hagaajinta faa'iidooyinka ay hadda bixiso. Shirkeedii ugu dambeeyay ee horumarineed ee toddobaadkan ka dhacay San Francisco, Samsung ayaa ku dhawaaqday taas Bixby horeyba waxay ugu jirtay 160 milyan oo qalab adduunka oo dhan.
Tirooyinkan ayaan kaliya u dhigmin taleefannada casriga ah, laakiin sidoo kale waxaa laga helaa TV-yada casriga ah iyo qalabka kale ee guryaha ee ay Samsung hadda ku bixiso goobtan, marka lagu daro qalabka IoT, goob si tartiib tartiib ah loogu soo bandhigo qiime aad u soo jiidasho leh, in kastoo xilligan ay ku egtahay Mareykanka.
Shirkan ugu dambeeyay, Samsung waxay ku dhawaaqday inay ka shaqeyneyso sidii ay u bixin lahayd xirfado sida kuwa aan ka heli karno Amazon's Alexa. Si tan loo sameeyo, wuxuu soo bandhigay Capsules, nooc ka mid ah sheybaarada si uu u awood u yeesho inuu soo bandhigo labadaba codsiyo iyo maqaarro caadiya oo loogu talagalay dadka mustaqbalka ku hadla kuwa caqliga badan ee shirkaddu qorsheyneyso inay ka bilowdo suuqa, iyadoo ah Galaxy Home Mini mid ka mid ah.
Isla goobtaas, waxaad ka arki kartaa sawirkii ugu horreeyay ee rasmi ah ee Samsung Galaxy Home Mini, a ku hadla caqli leh oo leh tikniyoolajiyadda AKG oo ay u badan tahay inuu suuqa soo galo ka hor dhammaadka sanadka Si looga faa'iideysto jiidashada dukaamaysiga kirismaska. Hadalkan wuxuu noqon doonaa walaalka ka yar Galaxy Home, oo ah Galaxy Home oo ay soo bandhigtay ku dhawaad ​​sanad iyo badh ka hor tan iyo markaas wixii keli ahaa ee aan ka ogaanayna waa dib u dhaca ku yimid bilaabitaankiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Bixby hadda waxaa lagu heli karaa in kabadan 160 milyan oo qalab
Iyagu Ma ahan Harag ,,, waa Xirfado sida kuwa Amazon Alexa ah.
Sax, ma aqaan sida aad u aragto ereyada la dheeshay taasina waa dhib.
Waad ku mahadsan tahay wax ku biirinta iyo salaanta.
Microsoft waxay isugu keentaa dhammaan codsiyada Xafiiska hal codsi